Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / UMHLAHLANDLELA WOKUTHENGA KAKHULU WABAKHULU
2020 / 11 / 16 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4695 0
Faka isitayela nokusebenza ngepayipi elisha lasekhishini. Enye yezinto zokwenza izinto zasekhishini ezisebenza kakhulu futhi iphinda kabili njengesiqeshana sokugqamisa - ipayipi lakho lasekhishini.
Noma ngabe ugeza ukudla, ugijimela ukulahlwa kukadoti noma ugcwalisa ibhodwe ukubilisa amanzi ajwayelekile, umpompi uyaqhubeka ukhishwa uvaliwe.
Ngenxa yokusetshenziswa kaningi, uzofuna ukukhetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esingakwazi ukumelana nobunzima bokwenza kwaso kwansuku zonke.
Ukunquma nge-Faucet enhle kakhulu yasekhishini
Cabanga ngokulandelayo lapho ukhetha futhi thenga ompompi online.:
Design bese uqeda
Isibambo esisodwa kuqhathaniswa nesibambo esimbili
Idizayini Yompompi Wekhishi Nokuqedela
Ompompi basekhishini angathengwa ngokufaka okuningana, izitayela kanye nokuqeda. Khetha kusuka kulungiselelo oluphakathi nendawo, imbobo eyodwa, izimbobo ezimbili noma ukulungiswa kwodonga. Oompompi basekhishini ngokuvamile bangezela ipuleti lokuhlobisa noma ukufaka ukufaka ukusekela ukusetshenziswa ngamasinki amathathu noma amane emigodi.
Imiklamo yokubamba ishintsha isuka ezigungwini ezinhle naseziphambanweni iye kumaluphu nakuma-knob, kuyilapho ama-spout design ahluka kusuka ku-arc ephezulu nge-180 ° swing kuya ku-arc ephansi nge-pullout spray wand. Izinhlobo ezinkudlwana zemiklamo ye-spout ziyatholakala phakathi kompompi abanezibambo ezimbili njengoba i-spout ingavinjelwa ukulawulwa kokulungiswa kwesikhashana.
Ukuqedwa kompompi kuningi futhi kunganikeza ikhishi lakho lokho okuzwayo okwenziwe ngokwezifiso okudumile. Okunye ukuqeda okudumile kufaka i-chromium, insimbi engagqwali, mnyama / ithusi, i-nickel nokuningi. Khetha umpompi osekelwa iwaranti eqinile; abakhiqizi abaningi bepompo banikeza iziqinisekiso zokuphila isikhathi eside ngokumelene nokungcola.
Izici Ezikhethekile: Iziphepheli, Izinsiza Zensipho / Amalambu nezinhlelo ezakhelwe ngaphakathi zokuphuza amanzi
Izifutho nezinsiza ezakhelwe ngaphakathi zensipho / ukhilimu yizici ezithandwayo zompompi basekhishini; ama-sprayers angatholakala njengokudonsa okuvela ebuchosheni bepompo noma njengesici esiseduze kwesipingi. Uhlelo lokuhlunga amanzi oludidiyelwe luyisici esisha uma kuqhathaniswa futhi luzobe lunikeza amandla okuhlunga amanzi ajwayelekile empompini wasekhishini.
Izinzuzo zompompi bokudonsa zibandakanya ukulawula ngesandla esisodwa ukugeleza kwamanzi nesifutho, kanye nawo wonke amasinki ekhishi abangahlala kuwo. Izipreyi eziseceleni zingathengwa ngazinye futhi zifakwe kosinki abanemigodi eyengeziwe. Kodwa-ke ukuthola umdlalo ophelele wepompo yakho ekhona kungathatha umsebenzi othile; ngisho nalawo afika nompompi kwesinye isikhathi enziwa ngezinto ezihlukile kunompompi uqobo lwawo.
Izifutho zingasetshenziselwa ukugeza izitsha, ukugeza amasinki nokuhlanza imifino
Amashubhu wesifutho afakwe eceleni angadlula u-4 'ubude ukuze afinyelelwe kakhulu
Ama-dispensers esepha / e-lotion akhelwe ngaphakathi awasizi kuphela ukunciphisa imfuhlumfuhlu ezungeze idreyini yakho, futhi ngaphezu kwalokho afanisa umpompi wakho wokubukeka okunethezeka. Imbozwe kahle ngaphansi kwe-counter-top, idamu lingathatha inani elanele lensipho noma ukhilimu; amanye ama-dispensers afaka ifaneli yokugcwalisa ukuze kube lula kuwe.
Isibambo esisodwa Vs. Amapayipi ompompi amabili ekhishi
Ukubekwa nokwakhiwa kwezibambo, kanye nokusetshenziswa okulula kuyahlukahluka kumbhobho kuya kumpompi. Iziphesheli ezinompompi abanezibambo ezimbili zingabekwa ngokushesha eduze kwesiphulu ngendlela esethwe phakathi nendawo noma zingabekwa kude eceleni ngokulungiswa okuvamile. Ngokulawula okungashisi nokubandayo okungachemile, ungafinyelela kalula ekulungisweni kokushisa okuqondile.
Ompompi isibambo esisodwa kukuvumela ukuba ulungise ngokushesha futhi kalula amanzi nokushisa kwamanzi ngesenzo esisodwa, usebenzisa uhlangothi olulodwa. Njengoba isibambo sidinga umsebenzi omncane ukuze sisebenze, singabanjwa ngesihlakala sakho noma ingalo uma izandla zihlala, zingcolile noma ziyinsipho.
Inkinobho yokumisa isikhashana (ku-Pullout Wand)
Abanye ompompi banikela ngenkinobho yenkinobho yokuphumula lapho empeleni ukunyakaza kwamanzi kungamiswa okwesikhashana kusuka kunduku yokudonsa.
Pot-filler isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Amapayipi okugcwalisa izimbiza asekelwa esakhiweni sodonga ngobubanzi ukuze kuvunyelwe amabhodwe asindayo ukuthi agcwaliswe ebangeni kunokuba awagcwalise kusinki.
Edlule :: Ungayithenga Kanjani I-Faucet Entsha Yekhishi Olandelayo: Ungayikhetha Kanjani Ompompi Abalungile Besizinda Sakho
Ukwakheka kanye nenqubo yokukhiqiza ompompi abamnyama
2021 / 01 / 10 1398
Imihlahlandlela yokuthi ungakhetha kanjani ompompi wokugezela omuhle
2021 / 01 / 10 1077
Qedela Izinyathelo Zomhlahlandlela Wokuthi Ungayifaka Kanjani Iringithoni
2020 / 12 / 21 5884
2020 / 11 / 19 5031
2020 / 11 / 19 4594
2020 / 11 / 18 4845